Naya Bikalpa | अर्थमन्त्रीकाे ओठे निर्देशन बीमा कम्पनीले किन मान्दैनन ? - Naya Bikalpa अर्थमन्त्रीकाे ओठे निर्देशन बीमा कम्पनीले किन मान्दैनन ? - Naya Bikalpa
अर्थमन्त्रीकाे ओठे निर्देशन बीमा कम्पनीले किन मान्दैनन ?
प्रकाशित मिती: २०७७ पुष ४, १७: ४३: ३१
काठमाडौँ– बालुवाटार काण्डका मुख्य याेजनाकार भनिएका अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलकाे निर्देशन विमा कम्पनीले किन मान्नु ? उनै अर्थमन्त्रीले पटक पटक दिएकाे ओठे निर्देशन विमा मालिकले पटक पटक लत्याउँदै आएका छन् । उदाहरण खाेज्न टाढा जानै पर्दैन् ।
महानगरपालिकाले आफ्ना जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सामाजिक परिचालक गरी एक हजार ९८२ को गत जेठ तेस्रो साता बीमा गराएको थियो । जसमा जनप्रतिनिधि र सबै कर्मचारीको (स्थायी, अस्थायी, करार र सामाजिक परिचालक, पत्रकार÷सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, नगर प्रहरी) बीमा गराएको हो ।
२०७७ पुष ४, १७: ४३: ३१